မျက်လုံးကျန်းမာရေးအတွက် ဒါတွေသိထားသင့်တယ်နော် - YOYARLAY Digital Media and News
လူအတော်များများက ရောဂါလို့ဆိုလိုက်ရင် နှလုံးတို့၊ သွေးတိုးတို့လို တကယ့်အကြီးကြီးတွေကို အရင်ပြေးမြင်မိတတ်ကြမှာပါ။တကယ်တော့တစ်ကိုယ်လုံးမှာရောဂါမဖြစ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းဆိုတာမရှိပါဘူး။ ဒီလိုပဲ နေ့တိုင်းမရှိမဖြစ်အသုံးပြုနေရတဲ့ မျက်လုံး၊ ပါးစပ်၊ နှာခေါင်း လိုအစိတ်အပိုင်းတွေလည်း ပြဿနာပေါ်တတ်တာမေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခုတစ်ခေါက်တော့ ကျွန်တော်တို့ အမြဲတမ်းသုံးနေရပြီး ဂရုစိုက်ဖို့မေ့နေတတ်တဲ့ မျက်လုံးတစ်စုံအတွက် ဂရုစိုက်ရမှာလေးတွေ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
၁. တစ်နှစ်တစ်ခါ မျက်လုံးမစစ်ဆေးဘူး
‘ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက်ပိုကောင်း၏’ ဆိုတာ ဘယ်ရောဂါအတွက်မဆိုမှန်ပါတယ်။ အသက် ၄၀ ကျော်သူတိုင်း ကိုယ့်မျက်လုံးကို တစ်နှစ်တစ်ခါတော့ မှန်မှန်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှရေတိမ်စွဲတာလို အန္တရာယ်များတဲ့မျက်လုံး ရောဂါတချို့ကို အချိန်မီတားဆီးနိုင်မှာပေါ့။ မိသားစုမျိုးရိုးမှာ မျက်လုံးပြဿနာရှိသူတွေဆို ပိုတောင်ဂရုစိုက်စစ်ဆေးသင့်ပါသေးတယ်။
၂. မျက်လုံးယားနေတာကို ဂရုမစိုက်ဘူး
မျက်လုံးကဘာကြောင့်မှန်းမသိဘဲ ခဏခဏယားနေတာ၊ နီရဲလာတာ၊ ပူစပ်ပူလောင်ခံစားရတာတွေက မျက်လုံးပြဿနာတစ်မျိုးမျိုးရဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မျက်လုံးက အလင်းရောင်ဒဏ်မခံနိုင်တာ၊ မျက်တောင်ခတ်ရင် ခိုးလို့ခုလုဖြစ်နေတာ၊ မျက်ဝတ်ခဏခဏထွက်တာတွေကလည်း မျက်စိဆရာဝန်နဲ့ သေချာပြသပြီးလိုအပ်သလို ကုသမှုခံယူသင့်တဲ့အခြေအနေတွေပါ။
၃. မျက်လုံးမှာဒဏ်ဖြစ်သွားလည်း ဂရုမစိုက်ဘူး
မျက်လုံးထိခိုက်မိရင် ဘယ်လောက်သေးတဲ့ထိခိုက်မှုပဲဖြစ်ဖြစ် မပေါ့ဆဖို့ မှာပါရစေ။ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူးကွာဆိုပြီး ပေါ့သေးသေးထားလိုက်ရင် အချိန်လွန်မှ အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးသွားတဲ့အထိ ခံစားသွားရနိုင်လို့ပါ။ အထူးသဖြင့် ထိမိခိုက်မိပြီး မျက်လုံးကကြည့်ရတာသိပ်မကောင်းဘူးဖြစ်နေမယ်၊ မျက်လုံးကောင်းကောင်းဖွင့်လို့မရဘူး၊ မျက်လုံးရဲ့အဖြူကွက်တွေထဲမှာ သွေးစလေးတွေမြင်နေရမယ်၊ မျက်လုံးကလှုပ်ရှားလို့သိပ်မကောင်းဘူး၊ မျက်စိသားငယ်အိမ်က တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် မညီဘူးဖြစ်နေမယ် စတာတွေထဲက တစ်မျိုးမျိုးခံစားရမယ်ဆို မျက်စိဆရာဝန်နဲ့ ပြကိုပြသရပါမယ်။
၄. မျက်လုံးကို ခဏခဏပွတ်တယ်
မျက်လုံးကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းပွတ်လိုက်တာက မျက်လုံးပြဿနာကို ပိုဆိုးစေဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်တွေက အရာဝတ္ထုမျိုးစုံကို တစ်ချိန်လုံး ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနေတာဖြစ်လို့ ပိုးမွှားမျိုးစုံကပ်တွယ်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လက်နဲ့ပွတ်ရင်မျက်လုံးထဲကို ပိုးမွှားမျိုးစုံဝင်သွားနိုင်ရုံတင်မကပဲ မျက်လုံးသွေးကြောမျှင်လေးတွေ ကိုလည်းပျက်စီးစေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မျက်လုံးကို မဖြစ်မနေ ထိတွေ့ဖို့လိုလာရင်တောင် လက်ကိုသေသေချာချာအရင်ဆေးကြောဖို့ သတိရပါ။
၅. တစ်ချိန်လုံး မှန်သားမျက်နှာပြင်(screens) တွေပဲကြည့်နေတယ်
ကျွန်တော်တို့တွေနေ့တိုင်း ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်း၊တီဗီမျက်နှာပြင်တွေရှေ့မှာ အချိန်ဘယ်လောက်တောင်ကုန်ဆုံးနေရပါလဲ။ တကယ်တော့ ဒီအချက်ကို ကိုယ့်ဖာသာဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်တွေကို အချိန်ကြာကြာကြည့်တာက မျက်လုံးကိုအားနည်းလာစေပြီး ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာတွေကိုတောင် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်ကြောင့် မဖြစ်မနေသုံးနေရတယ်ဆိုရင်တောင် ၂၀/၂၀/၂၀ ဆိုတဲ့စာလုံးလေးကိုသတိရပါ။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ တီဗီမျက်နှာပြင်တွေကို မိနစ် ၂၀ ကြာအောင်ကြည့်ပြီးတိုင်း ပေ ၂၀ အကွာက မြင်ကွင်းတွေကို စက္ကန့် ၂၀ ကြာအောင် ကြည့်ပေးဖို့ပါ။
၆. လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေမှာ Safety Glass တွေမဝတ်ဘူး
ဒါလည်း ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အားသွန်ခွန်စိုက်ကစားရတဲ့အားကစားတွေလုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်လုံးထိခိုက်မိနိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး safety glass၊ safety shield၊ eye guards တွေ ဝတ်ဆင်ပေးပါ။ မျက်လုံးဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး တအားလည်းနူးညံ့တာမို့ အမြဲသတိနဲ့ ကာကွယ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။
ဆေးလိပ်က ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာကောင်းကျိုးမှမပေးပါဘူး။ မျက်လုံးအတွက်လည်း အလားတူပါပဲ။ ဆေးလိပ်သောက်လေ့ရှိသူတွေမှာ မျက်လုံးတိမ်စွဲခြင်း၊ မျက်လုံးအာရုံကြောများ ပျက်စီးခြင်း၊ အမြင်အာရုံတဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းတွေ ကြုံရပြီး အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ မျက်စိကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါလည်း မျက်လုံးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့အချက်တွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ အနီးမှုန်ဖြစ်ဖြစ် အဝေးမှုန်ဖြစ်ဖြစ် မျက်စိပါဝါ ရှိလာရင် မျက်မှန်တပ်သင့်ပါတယ်။ ပါဝါရှိတာကို မျက်မှန်မတပ်ဘဲ နေလိုက်ရင် အချိန်နဲ့အမျှ မျက်စိမှုန်တာပိုဆိုးလာတော့မှာပါ။
Previous Previous post: အတွေးလွန် ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို လောင်မြိုက်မနေပါစေနဲ့
Next Next post: ခရီးလမ်းတစ်ခုမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ခွေးလေးက သခင်ရဲ့အိမ်ကို (၃၇) မိုင်ခရီးနှင်ပြီး ပြန်ရောက်လာ
အိမ်ရာမဲ့တွေရဲ့ ဒုက္ခပဒေသာပင်မှာ အိပ်ရေးပျက်ခြင်းကလည်း ဒုက္ခတစ်ခုပါပဲ။ နွေညတွေထက်စာရင် အပူချိန်ကျဆင်းတဲ့ဆောင်းညတွေနဲ့ စိုစွတ်တဲ့ မိုးညတွေက သူတို့အတွက် ပိုခက်ခဲကြပါတယ်။ Post Views: 2,374